Wararkii Ugu dambeeyay Dagaalyahandii Shabaab ee gaaray Deegaanada Maamulka Puntiland – STAR FM SOMALIA
Wararka ka imaanaya Gobolada Mudug iyo Nugaal gaar ahaan dhulka ku yaala xeebaha ayaa sheegaya in ay dadka ku dhaqan goobahaasi ay lasoo daristay cabsi xoogan ayna ka walaacsan yihiin Shabaabka tirada badan ee deegaanadaasi kusoo jabay.
Dadka ayaa ah kuwa aad u hadal haya sheekada ku saabsan Dagaalyahanada Al-Shabaab ee doomanka ku gaaray Deegaano badan oo gacanta ugu jira maamulka Puntiland, waxa ayna dagaalyahanadan ku dhax lugeenayaan gudaha deegaanada ay tageen.
Wali lama sheegin wax dhibaato ah ay dadka u geesteen Shabaabka gaaray deegaano badan oo katirsan dhulka uu ka taliyo maamulka Puntiland , waxa ayna dadka ku wargalinayaan in ay is dajiyaan ayna kasii gudbayaan deegaanadooda.
Maamulka Puntiland ayaan wali qaadin wax tilaabo ah oo ku aadan Shabaabka deegaanadooda kusoo faafay, waxaana masuuliyiinta maamulkaasi kaliya ay qaadeen tilaabo ah in ay Warbaahinta ka hadlaan ayna jeediyaan eedeyn.
Wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo Dagaalyahanada Shabaab ee gaaray Deegaanada Puntiland ayaa sheegay in xalay qaarkood ay ku hoydeen degmada Bandar-bayla ee Gobolka Bari, halka dagaalyahanada kalana iyaguna ku hoydeen deegaano kale.
Dagaalyahanada Al-Shabaab oo u kala qeybsan dhoor kooxood ayaa ku socda jihooyin kala duwan, walina ma cada goobta rasmiga ah ee ku wajahan yihiin dagaalyahanadan iyo waliba ujeedka ay u gaareen deegaanada Puntiland.
Al-Shabaab wali kama hadlin dagaalyahanadan kooxdooda katirsan ee gaaray Deegaanada maamulka Puntiland, waxaana soo baxaya warar sheegaya in dagaalyahanadan ay yihiin kuwa taageersan dagaalyahanadii dhawaan Shabaab ka go’ay ee sheegay in ay ku biireen Daacish kuna sugan buuraha Galgala.
Xaalada Puntiland ayaa u muuqata mid kacsan, waxaana dadku ka cabsi qabaa waxa ay la imaan kara dagaalyahnadan tirada badan ee kasoo tagay koonfurta kuna soo jabay deegaanada uu ka arimiyo maamulka Puntiland.